Miverina amin’ny fandaharan’asan’ny vala-java-boahary
Akomba manga maso - Eulemur macaco flavifrons
Raha ara-sokajy dia ao anatin’ny Lemuridae ny akomba manga maso. Antonitonin’ny haben’ny raha oharina amin’ireo karazan-gidro voakasik’io fianakaviana Lemuridae io. Nanomboka tamin’ny taona 1983 no nahafantarana bebe kokoa momba azy io rehefa tsy hay mihintsy nandritran’ny taon-jato [Koenders et al., 1985]. Vitsy ireo fikarohana natao momba azy ka izany indrindra no tsy dia nahafantarana azy loatra. Eo ho eo amin’ny 2700 km² no haleben’ny ala misy azy. Hita any ala avatra andrefan’i Madagasikara sy ny tanimboly toy ny tany kafe, voasary sns… Vitsy ny vondron’ny akomba manga maso sisa tavela ary amin’ireny ala efa simbasimba sy ao amin’ny saikanosin’i Sahamalaza no tena misy azy ankehitriny [Mouton, 1999; Schwitzer et al., 2006].
Tsy fantatra ny isan’ny akomba manga maso sisa any anaty ala. Ny fanisana farany dia manamarika fa eo ho eo amin’ny 2780 ka hatramin’ny 6950 ny akomba sisa [Schwitzer et al., 2005]. Ny fihazana sy ny fanimbana ny ala no fahavalony ary izany indrindra no nahatonga ny IUCN [Mittermeier et al., 1994] nisokajy io karazan-gidro io ho ao amin’ny kilasy tena atahorana ho lany taranaka. Tamin’ny taona 2012 dia niisa 29 ireo akomba manga maso tany amin’ny vala-javaboahary eropeanina. Ny fitehirizana sy fikarakarana ireo akomba ireo dia sahanin’ny EEP ka ny Mulhouse Zoo. no nandrindra izany.
Miisa eo ho eo amin’ny 2 ka hatramin’ny 13 ny akomba manga maso ao anatin’ny andiany iray, izay manome salan’isa 5,5 akomba isaky ny andiany [Rakotondratsima, 1999; Garbutt, 1999]. Ny fikarohana natao tany Duke University Primate Center dia manambara fa manjaka kokoa ny akomba vavy raha mihoatra amin’ny lahy, Digby & Kahlenberg [1999, 2002]